Kurwara: anogona mushandi asingataure nezvekumiswa kwebasa anogona kuitwa redundant?
Yakatumirwa ne Tranquillus | 15 Sea, 2021 | Pamusoro pewebhu
Mumwe wevashandi vangu pazororo rekurwara haana kunditumira zororo rake idzva rekurwara uye haana kuzodzokera pabasa rake mushure mekumiswa kwebasa. Anondipomera mhosva yekusaronga kushanya kwekutevera kumushonga webasa. Ndinogona here kuona kusavapo uku sekusiya basa rangu ndodzinga mushandi wangu?
Dare reCassation nguva pfupi yadarika raifanira kutonga nyaya yakafanana.
Kusaruramisirwa kusavapo: nzvimbo yekudzokera
Zororo rekurwara kwenguva yemwedzi mumwe rakanga ratangwa kumushandi. Pakupera kwekumiswa uku, mushandi asina kudzoka kunzvimbo yake yebasa uye asina kutumira chero kuwedzerwa, waanoshandira akamutumira tsamba achimukumbira kuti aratidze kusavapo kwake kana kuti atangezve basa rake.
Mukusavapo kwemhinduro, mushandirwi akadzinga munhu ainetsekana nehunhu hwakakomba hwakakonzerwa nekusavapo kwake pasina chikonzero, izvo zvinoenderana nemushandirwi zvakaratidza kusiya chigaro chake.
Mushandi akabata dare remabhizimusi, achipokana nekudzingwa kwake. Sekureva kwake, asina kunge ari iye akagamuchira masamanisi ekudzokororwa kuongororwa nevemabasa ekurapa, chibvumirano chake chakaramba chakamiswa, saka akange asina
Kurwara: anogona mushandi asingataure nezvekumiswa kwebasa anogona kuitwa redundant? July 8th, 2021Tranquillus
VERENGA BA BAdge: ziva uye shandira pamwe nemabheji akavhurika
pashureBan kuperetera zvikanganiso pabasa
zvinoteveraIyo muripo wakapihwa muchibvumirano chekubatana mune chiitiko cheSvondo basa haishande kune vese vashandi vanoshanda zuva iro!
Unhu hutanhatu hwemutungamiri akanaka uye maneja akanaka
16| Kana paita tsaona kubasa ndiani anozivisa tsaona kubasa?
Kudzora njodzi dzebasa mukuchengetedza zviyo